Dib u Eegid Cabsi: Calaamadaha Qalabka Macluumaadka Shabakada ah ee Ku Caawin Karaa
Waxaan ognahay in duubista websaydka uu yahay mid adag. farsamo taas oo ku lug leh bar-tilmaameedka iyo ka saarista macluumaadka laga helo boggag kala duwan. Ganacsiyada intooda badani waxay ku tiirsan yihiin xogta, iyo aaladaha fudud ee shabakada fudud waxay xallili karaan dhibaatooyinka xogta la xidhiidha ee naga siinaya waxyaabo badan oo firfircoon oo faa'iido leh.
Faa'iidooyinka la taaban karo ee qalabyada shabakada shabakadda waa ay fududahay in la isticmaalo waxayna soo saari karaan xogta saxda ah dhawr ilbiriqsi. Qaar ka mid ah ikhtiyaaraadka waa bilaash, halka kuwa kalena la bixiyo. Qalabaynta webka waxay u muuqdaan inay kala duwan yihiin midba midka kale iyada oo ku saleysan sifooyinka, doorashooyinka, iyo gaarsiinta. Qaar ka mid ah waxay ubaahan yihiin qawaaniin intay kuwa kale aysan kaa rabin inaad leedahay xirfadaha barnaamijka.
Haddii aad raadineyso inaad soo qaadato xog aad u tiro badan ama jadwalka mashruucyada shabakad-raadinta ee webka, Agent wuxuu qaban doonaa hawlo badan oo adiga kugu habboon. Isticmaalida qalabkani, waxaad isku duubi kartaa shaqooyin kala duwen oo isku xiga oo xoqaya xog aad u tiro badan. Waxay na siisaa xogta la xoqay ee qaababka JSON, TSV iyo CSV waxayna isticmaalaan API-yada si ay u saxaan xog ururinta luuqadda barnaamijka ee aad dooratay. Nidaamka bilaashka ah wuxuu leeyahay tiro xaddidan oo la kala dooran karo, sidaas darteed waxaad ka faa'iideysan kartaa qaybta lacagta ah ee la socota damiin lacageed dhabarka.
CloudScrape wali waa qalab kale oo xogta webka ah oo ku yaal aaladaha taageeraya xog ururin weyn oo aan u baahnayn wax soo dejin. Barnaamijka ku salaysan browser-ku salaysan wuxuu si sahlan u samaysan karaa gorgoriyayaashiisa isla markaana wuxuu soo saaraa macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee adiga kugu habboon. Kadibna, waxaad kaydin kartaa xogta la soo saaray ee Google Drive iyo Box. net ama soo dhoofin sida CSV iyo JSON.
Datahut waa qalab aad u sarreyn kara, jajaban, iyo qalab wax ku-ool ah oo macaamil ganacsi oo laga helo dhammaan macluumaadkaaga baahidaada. Waxaad heli kartaa macluumaadka saxda ah qiimaha macquul ah iyo 100% damaanad-celin lacageed. Waa in aad maskaxda ku haysaa inaysan jirin wicitaan bilaash ah oo ah Datahut, laakiin qaybta qiima-lacageedku waa miisaaniyad-saaxiibtinimo oo ku habboon bilowga iyo shirkadaha abuuray. Waxay isku xirtaa xogta laga helo goobo badan oo waxay soo uruurisaa alaab, content, sawirro, iyo profiles adiga.
Webaas. io waa codsi shabakad ah oo si toos ah iyo sahlan u helaya xogta habaysan oo adeegsanaya tiknoolajiyada shabakadda si loo qabto hawlo kala duwan. Waxay leedahay karti ay ku muujiso boggaaga iyo xogta laga soo qaato boggaga internetka ee ka badan 200 luuqadood. Waxay taageertaa RSS, JSON, HTML iyo faylasha XML.
Mid ka mid ah kuwa ugu fiican qalabka wax lagu qoro waa Fivetran. Waa xog-bixiye awood leh oo lagu kalsoon yahay oo kaydiya tamartaada iyo waqtigaaga. Wakhtiga la joogo, Fivetran wuxuu soo saari karaa 100 illaa 100000 bog oo shabakad la'aan ah Source .